Hey Ry namana, Izao tutorial izahay mampahafantatra Ho anao ny lalana marina mba hahazoana Spotify Premium apk amin'ny finday Android. Raha zava-mahatahotra tia mozika sy ny andro mifarana amin'ny mozika, ianao koa tandremo ny mozika isaky ny miasa, dia io no andinin-teny ho anareo fotsiny. Music Hanampy anao hiala amin'ny alahelo sy hahatonga anao afa-po.
Misy maro ny fampiharana izay mamela anao tandremo ny mozika amin'ny Internet, na hahazo azy io ao an-toerana ao amin'ny milina. Rehefa fantatrao rehetra, Spotify dia kaontiana ny tsara indrindra ho an'ny mozika fampiharana Android, na izany aza fa tsy avy ao amin'ny toerana iraisam-pirenena maro. Fantaro io andinin-teny momba ny Spotify Premium apk ho an'ny Android.
Spotify Premium apk dia fampiharana izay manome anao Anarana iombonana amin'ny nomerika mozika sy ny podcasts, ny toerana mba hitandrina ka mahazo am-polony tapitrisa ny hira maimaim-poana. Ity fampiharana manana ny mety hiova ao amin'ny mpiara-mitory tsara indrindra ho toy ny fanevan'ny ny fampiharana faharoa dia ny tsy.
Spotify Premium apk azo alaina maimaim-poana. Ankoatra izany miasa amin'ny milina na ny toerana rehetra mba hahazo ny toerana tena hira, ary tandremo ho azy ireo isaky mila. Izao fampiharana, dia mety hamorona ny filaharan-kira izay afaka teny na oviana na oviana, na ianao koa dia afaka misafidy ny sasany Playlists amin'ny aterineto. Mahazo mivantana ianao Anarana iombonana amin'ny mpanakanto sy ny Albums mba mitandrema.
Misy maromaro ny fonosana toy ny maimaim-poana, fitsarana, ary manam-petra Premium dikan fampiharana ity. Maro no te-hitandrina ny hira an-mifanaraka amin'ny azy ireo avy downloading, misy betsaka fampiharana ho azy ireo, na izany aza dia tsy manana safidy maro, na manana dokam-barotra be loatra, na dia tsy ho afaka.
Misy be dia be ny fampiharana mba tandremo ny mozika, na izany aza dia iray akory aza ho tanteraka ianao rehefa roa minitra. Raha toa ianao mozika iray tena tia dia tsy maintsy miezaka Spotify for Android satria ny laharana four.5 avy 5 ao anatin'ny Google Play Retailer-jatony ny olona.
Plus, io rindrambaiko manana mazava interface tsara sy ny zavatra tsara hafa izay mahatonga azy ho azo ianteherana tsy tapaka fampiasana. Olona mahazo fahafinaretana avy amin'ny Spotify, rehefa mety mieritreritra ny sasany Downloads sy ny tsikera.
Ny Premium Spotify fampiharana dia mozika sy ny lahatsary mivantana rindrambaiko sasany safidy fanampiny, mifanitsy amin'ny peo mpanome tolotra, dikan'izany dia afaka mamorona fiaraha-monina azo ekena ny mozika, ary hanome anao ny tsara fahaizana.
Tokony hampiasa Spotify Premium, ary mety hahazo ny tsara indrindra fahaizana mozika, ary ianao koa dia afaka mahazo hira avy amin'ny samihafa izay nampivoatra ny karazana fonosana ity fampiharana. Fanteno ny marina dia midika hoe izay miasa noho ny tadiaviny sy ilaina.
Fotsiny tsindrio eo amin'ny bokotra hahazo mba hanomboka ny iray ihany no mahazo ao faharoa ary avy eo mianatra ny hanangana teknika io fampiharana. Hahazoana antoka tsy dinganina misy dingana na manao fahadisoana.
Manaraka toetr'andro Feb 20, 2018
fitaovana 200,00aotra,00aotra +
Ilaina Android four.1 + (SDK 16)
Content ara-nofo Score naoty for 12+
Options - Spotify Premium apk ho an'ny Android
Betsaka ny safidy ny Spotify Premium. Ianao ho afaka ny hilalao izay miray feo tianao hilalao ao amin'ny finday. Fanampin'izany, raha hitranga mba hahazoana ny Spotify Premium apk, Avy eo ianao koa dia afaka mahazo miray feo maimaim-poana maimaim-poana. Izao Premium dikan, mety ho afaka ny pop-ny dokam-barotra isan-karazany sy ny dokam-barotra amin'ny spam. Fanampin'izany safidy iray hafa dia niresaka momba ny.
Ity fampiharana tanteraka dokambarotra malalaka sy ianao gained't hahazo na inona na inona ny pop-dehibe na malware.
Hahazo ny manam-petra Skip andraisana asa fampiharana ny nentim-paharazana tsy mahazo izany amin'ny dokam-barotra avy.
Izao fampiharana, dia efa nanainga fiara kisendrasendra fameperana. Ity fampiharana no maimaim-poana mba hahazoana ary mety mivantana manam-petra mozika maimaim-poana.
Ianao koa dia afaka mahazo ny hira amin'ny finday maimaim-poana amin'ny kalitao ambony, ary tandremo ny azy isaky tianao.
Ianao koa dia afaka fampitahana matetika ny hira ao amin'ny fitaovana isan-karazany na ny finday, levitra ary na dia ao amin'ny ordinatera. Ianao ho afaka tandremo ny maro amin'ny radio maimaim-poana avy handoa izay vola.
Ahoana no misy afaka Manangàna Spotify apk amin'ny Android
Sokafy ny findainy ny Settings, In Fikirana, zava-dehibe ny mamela ny nanangana ny loharanom-baovao tsy fantatra. Mandeha Settings - Safety - mifidy Unknown Sources.
Sokafy ny antontan-taratasy alaina amin'ny alalan'ny fomba iray mpanara-maso rakitra na manokatra fotsiny ny antontan-taratasy avy amin'ny lisitra Downloads. Dia tsindrio eo amin'ny Hametraka ary miandry segondra vitsivitsy. Ary dia ho marihina fa ny hanorina mahasoa.
Ary hanokatra ny fampiharana izay nataony tao fotsiny izao, ary avy eo niara-maso ao amin'ny Spotify kaonty. Raha toa ka tsy manana kaonty, ary avy eo vao ny vohikala ofisialy sy ny fisoratana anarana ho an'ny kaonty
Ary hanokatra ny fampiharana sy ny fandraisana an-tsoratra miaraka amin'ny kaonty isaky ny nanao sonia fotsiny ianao ka vonona. Ankehitriny dia mila mampiasa rindrambaiko ity eo amin'ny findainy ka tsy hisy olana.
Raha Miatrika fahadisoana tamin'ny lalana marina ny mametra io fampiharana, dia hahazatra fotsiny ny amin'ny US-fananan'ny VPN. Tanteraka ianao hahazo io hadisoana io any India ka olon-kafa tianao iraisam-pirenena. Ianao ho afaka fotsiny hiatrika ny miara-miasa amin'ny Spotify Premium apk. Ianao angamba efa mahomby tafiditra ao, hitanao ao amin'ny finday avo lenta ny safidy rehetra ny Spotify Premium eo amin'ny rantsan-tananao. Efa nanandrana izany fitaka, Ary tena miasa araka ny tokony ho antsika satria niezaka, Ary Na izany aza miasa.
Izany rehetra fa amin'ny andro ankehitriny, izay halalininao rehetra mikasika ny Spotify Premium apk ho an'ny Android. Misy maro ny antony hoe nahoana no tsara indrindra ny mampiasa io rindrambaiko amin'ny fomba samy hafa fampiharana. Mahazo teny feno ka tsy hisy karazana sy ny samy hafa amin'ny spam mampirisika ny olana. Izao Mod dikan-Spotify Premium ho an'ny Android, dia mety hahazo ny MP3 rakitra amin'ny 320 Kbps, izay dia kaontiana ihany mozika tsara indrindra. Ianao dia ho afaka hilalao mozika izany teo amin'ny fanamafisam-peo, rafi-peo na écouteur. Raha toa ianao mahita ny fahadisoana manerana ny nanangana Mazava ho azy fa ny, handeha fotsiny ny fanamarihana. Ny vondrona dia hanampy anao. Fanampin'izany, raha hitranga hahita manampy, mizara izany amin'ny rehetra ny vadiny sy ny mozika mba hanolotra azy ireo tia fahafinaretana.
Download farany dikan-Spotify Music .APK rakitra
sisa tavela nohavaozina: March 12, 2018
File lafiny: 37MB
Mankanesa any iombonana Posts :
Hamotipotika Hit apk Download
Vigo Video – Hypstar taloha 3.8.1 apk
GoPro apk Download – Free Photography APP ho an'ny | Best Apps for Android
Bobby Movie Box.APK Download – Best Apps Fa Mobiles
mpitandro filaminana – Mivory, Chat, Mandehana Live apk Download – Best Apps for Mobiles
Fildo apk Download – Free Music & Audio APP ho an'ny Android – Best Apps Fa Mobiles
Tompo Mobile apk Download – Best Apps for Mobiles
DomiNations apk 6.620.621 Update Download Latest Android
Tony – saintsaino, torimaso, Relax apk Download…
Google Chrome: Fast & Fiarovana apk Download…